Munamato Pfungwa Kune Vanotambura | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Munamato Pfungwa Kune Vanotambura
Munamato Pfungwa Kune Vanotambura
Nhasi tichave tichinangana neminamato mapoints kune vanoshaya. Munyika yakaita Naijeriya uko hurombo hwakanyanya, hazvigoneke kusave nevanhu vakati wandei vanoshaya chinhu kana chimwe icho. Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti munhu wese wedu kunyangwe mupfumi kana murombo ane chimwe chinhu isu tichiri kuna Mwari. Saka, sekupesana nevakakurumbira tenda kuti varombo chete ndivo vanomakwa vanoshaya, kunyangwe murume akapfuma pasi pano achiri kuda munamato uyu.
Yeukai chirikadzi wokwaZarefati nemwanakomana wake. Vaive nechikamu chekupedzisira chekudya mumba ndokuchipa muporofita washe. Mukudzoka, vaive nezvakawanda. Kudiwa kunogona kuuya mune chero chimiro, zvinogona kunge zviri zvinhu zvinodiwa sehembe, zvingave zvemari kudiwa, zvinogona kuve zvemwana, zvingave chero chinhu. Izvi zvinotsanangura kuti sei munhu wese achifanira kunamata uyu munamato.
Bhaibheri harina kurondedzera kuti Hana aive mukadzi murombo. Nekudaro, anga asina mufaro kwemakore nekuda kwekushaiwa kwake uko kwanga kusinga zadziswe. Hana aigona kunge aine mari yese pasi, asi akashaya chimwe chinhu chiri mwana. Bhaibheri rakanyora kuti Hana haana kumbopotsa Shiro gore rega, munamato wake chete waive wekuti Mwari avhure dumbu rake uye amupe mwana.
Kudiwa kwedu kunogona kunge kwakasiyana nekwaHana. Chatinoda chingave imba, ingave mota, inogona kunge iri muchero wechibereko, zvinogona kuva chero chinhu. Chinhu chimwe chete chatinofanira kunzwisisa ndechekuti Mwari anokwana kutipa moyo yedu yese zvishuwo zvichienderana nekuda kwake. Chinyorwa chiri mubhuku ra VaFiripi 4: 19 Uye Mwari wangu achazadzisa zvamunoshayiwa zvose maererano nefuma yake mukubwinya naKristu Jesu. Mwari akavimbisa kutipa zvese zvatinoda. Bhaibheri harina kuti Mwari vachatipa zvimwe zvatinoda, iro bhaibheri rakazvitaura pachena kuti Mwari vachatipa zvese zvatinoda zvinoenderana nefuma yake mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu. Izvi zvinoreva kuti muna Mwari tinokwana.
Ndinotema netsitsi dzeWekumusoro soro, zvese zvatinoda zvichapihwa nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndimi musiki wezvinhu zvese. Ndimi muiti wezvose. Ndiwe mupi mukuru. Ndinonamata kuti iwe ugopa ziso rako retsitsi kune vasina pekugara, uvape nyaradzo nhasi muzita raJesu. Muchavhenekera mwenje wenyasha pane avo vanoda nzvimbo yavanogona kuti kumusha. Ndinotema netsitsi dzaishe, kuti muchavawanisa muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira vaviri vakaroora kana vadiki kana vakuru vakatarisa kwauri kuti chibereko chedumbu. Bhuku raEksodho 23: 26 Pachava nemukadzi kana mukadzi asingabereki kana mukadzi asingabereki kana mukadzi asingabereki. Ndichazadzisa kuwanda kwemazuva ako. Makavimbisa neshoko renyu kuti hakungavi nenyonganiso panyika. Tenzi, ndinonamatira avo vanoda muchero wechibereko, ndinonamata kuti mupindure minamato yavo muzita raJesu. Ndinonamata kuti netsitsi dzako, sekudaira kwawakaita Hana uye nekumupa mwana anozotarisirwa, ndinonamata kuti ugopa moyo wemukadzi wese asingabereki muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira murume wese nemukadzi vasvika pazera rekuroora. Tenzi, kune wese munhu anoda wekuroora naye, ndinonamata kuti uvape kwavari muzita raJesu. Ishe, izvo zvavanotarisa kwauri. Chinhu icho chinoita kuti vacheme pakavanda, baba Tenzi, ndinonamata kuti mugozvipa nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira avo vanoda mubatsiri. Ishe, kunyangwe panzvimbo yavaisatarisira, ngavabatsirwe nemuzita raJesu. Chinyorwa chinoti ini ndichasimudza meso angu kumakomo, ko rubatsiro rwangu ruchabvepi? Kubatsirwa kwangu kuchabva kuna Jehovha. Baba Tenzi ndinonamatira rubatsiro runoshamisa, ngazviuye kwavari nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamatira avo vanoda tariro yekuenderera mberi nerwendo rwehupenyu. Jesu, ndinonamata kuti iwe uve simba ravo. Ishe, vapei tariro kwavanoda imwe muzita raJesu. Kana musana wavo warohwa kumadziro, Ishe ndinonamata kuti muve munyaradzi. Saizvozvo, ndinonamatira varombo nenherera. Ndimi baba venherera, ndimi amai venherera, Ishe ndinonamata kuti tsitsi dzenyu dzive pavari muzita raJesu.
Jesu, ndinonamatira munhu wese anoda basa. Ishe maererano netsitsi dzenyu dzisingaperi. Kunyangwe munzvimbo dzavaisatarisira. Munzvimbo umo kukodzera kwavo kusingaenderane nezvinodiwa, ndinonamata kuti iwe uvape nyasha muzita raJesu. Shoko renyu rinoti taura chinhu chobva chasimbiswa. Ndinoraira netsitsi dzaIshe, munhu wese anoda basa rakanaka anowana imwe vhiki rino muzita raJesu. Nyasha netsitsi dzaishe ngazvikuwanire chero kwauri pavhiki rino muzita raJesu.
Ishe Jesu. Ndimi mune tsitsi. Ndinorangarira wese akasurukirwa, iwo akaregererwa. Ivo avo nzanga yavakanganwa mumarwadzo avo uye kusuwa. Ndinonamata kuti iwe ugadzirise kurwadziwa kwavo muzita raJesu. Ndinonamata kuti muvayeuke nhasi uye muvakomborere nemuzita raJesu. Baba sekungoropafadza kwamakaita murume anonzi Obhedhi-Edhomu, ndinonamata kuti muchavatarisana netsitsi uye muvakomborere zvikuru muzita raJesu
Baba Tenzi, ndinonamatira munhu wese anoda kusunungurwa kubva muhutapwa hwemadhimoni. Chinyorwa chinoti uyo uyo mwanakomana akasunungura akasununguka zvirokwazvo. Ishe ndinonamata netsitsi dzenyu kuti muvasunungure kubva muhusungwa hwese nemuzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Yekusimudzira Hupfumi
inoteveraKunamata Points YeMwoyo Wakaputsika
Kunamata Points Kwenhengo dzeCorps Kushumira Nyika
Zvemuchato Annivers Munamato Points
20 minamato Pfungwa Kumiririra Muchinda wePersia